रचना रिमालले ‘जोसमा होस् गुमाउँदा’ क्यानले लियो एक्सन — Imandarmedia.com
रचना रिमालले ‘जोसमा होस् गुमाउँदा’ क्यानले लियो एक्सन
काठमाडौ। गायिका रचना रिमाल जबरजस्तै मैदानमा छिरेपछि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले स्पष्टिकरण सोधेको छ। क्यानले त्रिकोणात्मक टी–२० क्रिकेट शृङ्खलाको फाइनल खेलको क्रममा असम्बन्धित व्यक्ति पुरस्कार वितरणको समयमा मैदान प्रवेश गरेको विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको हो।
सोमबार कीर्तिपुरस्थित त्रिवि मैदानमा नेपाल र पपुवा न्युगिनी (पीएनजी)बीच ४ ओभरको खेल जारी रहँदा दर्शक गेट तोडेर भित्र प्रवेश गरेका थिए। मैले सुरक्षा निकायसँग बुझ्दा टिकट काट्ने काउन्टर र गेटसँगै परेको रहेछ।
हाम्रो पार्टनर (सुन्बी होल्डिङ) ले त्यहाँसँगै नराख भनेको रहेछ। अलि तल राखभन्दा त्यही राखेको रहेछ। त्यहीँ प्रेसर पर्‍यो। त्यो मौका पाउँदा हुल नै भित्र छिर्‍यो, क्यानका कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लले भने।
हामीले यसबारे सुन्बी होल्डिङसँग स्पष्टीकरण सोधेका छौँ ।’यसअघि क्यानले प्रतियोगिताको कमर्सियल राइट सुन्बी होल्डिङलाई दिएको थियो। सुन्बी होल्डिङले टिकटको लागि आईएमी–पे र सुरक्षाको लागि केटीएमलाई जिम्मा दिएको थियो।
खेल सकिएपछिसमेत दर्शक दीर्घाबाट मैदान प्रवेश भएपछि क्यानले सुन्बीलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो। क्यानले पुरस्कार वितरणका लागि प्रमुख अतिथिमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई आमन्त्रण गरेको थियो।
पुरस्कार वितरण समारोहमा गायिका रचना रिमाल र दर्शक नै मैदान प्रवेश गरी ट्रफीसहित फोटो सामाजिक सञ्जालमा राखिएको भेटेपछि क्यानले स्पष्टीकरण सोधेको हो।
दर्शकदीर्घाबाट खेल हेर्न प्रवेश गरेकी गायिका रचना रिमाल पुरस्कार वितरण समारोहमा भने मैदान प्रवेश गर्दै कप्तान सन्दीप लामिछानेलगायत खेलाडीसँग फोटो खिच्न भ्याएकी थिइन्।
उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा भिडियो र फोटोसमेत ‘पोष्ट’ गरेकी छिन्। सुरुमा सहयोगी होलान् भन्ने सोच्यौँ। फेसबुकमा पनि ट्रफी समातेर फोटो राखेको देख्यौँ। यो के कारणले भयो ? कसरी भयो ? भनेर हामीले स्पष्टीकरण सोधका छौँ, मल्लले भने।
मलेसिया, नेपाल र पीएनजी सम्मिलित टी–२० शृङ्खलाको फाइनल खेलमा पीएनजीलाई ५० रनले हराउँदै नेपालले उपाधि जितेको थियो । जुन सन्दीपको कप्तानीमा नेपालले प्राप्त गरेको पहिलो उपाधि बन्यो।
तेस्तै, सरकारले चीनका लागि नेपाली राजदूतमा अर्कै व्यक्तिलाई सिफारिस गरेपछि प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा एक्सनमा उत्रिएका छन्।
सापकोटाले आफ्नो छोरा रुपक सापकोटालाई चीनका लागि नेपाली राजदूत बनाउन चर्को दवाव दिएका थिए ।मिडियाहरुले लामो समयदेखि समाचार लेखेर खबरदारी गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसलाई रोकेका हुन।
आफ्नो छोरालाई नियुक्ती नगरेपछि उनले चिनियाँ समकक्षीलाई गुनासो सुनाएका छन्। सापकोटाले चिनियाँ समकक्षी ली झान्सुसँग कुराकानी गरेर आफ्नो गुनासो पोखेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार चिनियाँ जनसंसदको स्थायीका कमिटीका अध्यक्ष सभामुख झान्सु र सभामुख सापकोटाबीच शुक्रबार दिउँसो भर्चुअल रूपमा कुराकानीका क्रममा यस्तो गुनासो पोखेका हुन्।
साथै, कुराकानीका क्रममा दुई देशबीचको सम्बन्धका विविध आयामबारे छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।दुबै देशका सांसदहरूबीच नियमित भ्रमण आदान–प्रदानको आवश्यकताबारे पनि कुराकानी भएको थियो।
दुबै जनाले आफ्नो देशमा भ्रमण गर्न समकक्षीहरूलाई निम्तो पनि दिएका थिए। कुराकानीमा दुबै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयसहित संसदका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता थियो।
सरकारले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सिफारिसमा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पार्टीका निर्वाचन आयोगका प्रमुख विष्णुपुकार श्रेष्ठ सिफारिस गरेको छ । उनलाई सिफारिस गरेपछि सापकोट प्रचण्डसँग पनि फायर भएका छन्।